Ndingayithenga njani iMveliso kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 347
Kule mihla abantu banokwenza ukuthenga kwabo kwiPinterest kuba iqonga lisebenza ikakhulu Ikhathalogu yeemveliso ezenzelwe lonke usapho. Ngenxa yoku, kubaluleke kakhulu ukuba abantu bathobele uthotho lwemithetho eyilelwe kuphela ukuthobela zonke iiparameter ezichongiweyo ngexesha lokufumana iimveliso.
Ndiyabulela kuko konke oku, iingcali kwicandelo lonxibelelwano ngomnxeba zityhile malunga nendlela yokuthenga iimveliso kwiPinterest kwaye eyona nto intle kukuba awunyanzelekanga ukuba ulandele amanyathelo amaninzi. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba abantu kufuneka bazimisele ngokuthengisa izinto ngaphakathi kwiphepha.
Ngenxa ye Imigaqo-nkqubo yePinterest akukho micimbi ye-fiasco ngokubhekisele kummandla wezoqoqosho. Ngokuqinisekileyo le yenye yeenzuzo ezibonelelwa liqonga namhlanje ngenxa yemeko engqongqo yokujonga iimfuno zabasebenzisi.
Amanyathelo okuthenga imveliso kwiPinterest
Akukho zinto zininzi emva kokuthengwa kwePinterest, nangona ifunda njengesenzo esinzima kwihlabathi lokufumana izinto. Nangona kunjalo, abantu kufuneka bazi ngayo konke oko kubandakanya usuku nosuku.
Umzekelo wolu hlobo lwemeko lwenzeka ngokuthobela imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo-nkqubo yinkampani. Kukwabalulekile ukuba unganikezeli kwizindululo ezingekho ngaphakathi kwemigaqo ekhutshwe ngabanye abantu.
Abathengisi kufuneka bakhule ukuzithemba okupheleleyo emntwini abathi baphuhlise indawo yabo yokuthengisa kwimveliso ethile okanye kwinkonzo ethile. Ngale meko kukuba banokufumana amakhulu ezinto okanye ngokuchaseneyo, kuxhomekeke kwinto abaza kuyiphatha.
Ndingayithenga njani kwiPinterest?
Khetha ibha yokukhangela kwaye ubeke into okanye imveliso ofuna ukuyifumana
Emva koko, ithebhu yokuthenga kufuneka iboniswe ukuze ifumane iziphumo ezingcono
Funda iikhrayitheriya zokukhangela kakuhle kwaye uzongeze kwinqwelo yokuthenga
Nxibelelana nabathunywa xa kunokwenzeka into eyahlukileyo
Ukuba ibar yokuthenga ayiveli, abasebenzisi banokucofa ku: "Zonke iimveliso”. Xa ukhetha ukhetho, amakhulu okhetho aya kuvela ahlelwe zizikhonkwane ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Ungazithenga njani izinto ngezikhonkwane kwiibhodi?
Ukuba ufuna ukuthenga imveliso engaphakathi kwipini ngokwayo, akufuneki kubekho ngxaki malunga nayo. Kuya kufuneka kuphela ukuba umntu agqibe amanyathelo amathathu achazwe apha ngezantsi:
Fumana ipini ofuna ukuyongeza kwibhodi enikiweyo
Qinisekisa zonke iindlela zokuthenga kwimveliso
Cofa kwindawo yokukhetha ukwamkela iinkcukacha zezinto ezikhankanyiweyo
Namhlanje kukho iikhrayitheriya okanye izinto ezinokubaluleka xa uthenga kwiPinterest, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba unayo Yonke ingcaciso evela kumthengisi kunye nexesha lakhe kwimarike.
1 Amanyathelo okuthenga imveliso kwiPinterest
1.1 Ndingayithenga njani kwiPinterest?
1.2 Ungazithenga njani izinto ngezikhonkwane kwiibhodi?
Funda indlela yokunciphisa idatha yeselfowuni kwiYouTube
Ndifuna ukubona imiyalezo yam ye-Instagram kwikhompyuter.